Iimayl si degdeg ah u baxa waxa uu u noqon karaa iimaylka khatarta ah qoraagiisa
Posted by Tranquillus | Oct 24, 2021 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Iimaylku waa aaladda isgaarsiinta ugu weyn ee aan ku isticmaalno shaqada. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad ka taxadartaa inaadan fududaysan oo aad leedahay dabeecad xun oo qoraal ah si degdeg ah oo xun. Iimayl si degdeg ah u baxaa wuxuu noqon karaa mid khatar badan.
Faa'iido darrooyinka emaylka oo si dhakhso leh u baxay
Diritaanka emaylka ku qoran rabitaanka, xanaaqa ama xanaaqa ayaa si weyn u dhaawici doona kalsoonidaada. Runtii, saamaynta sawirkaaga ku leh qaatahaagu wuxuu noqon karaa masiibo.
Markaad si dhakhso leh iyo si kastaba u qorto emayl oo aad u dirto, aragtida ugu horraysa ee ku wareysigaagu yeelan doono ayaa ah inaad ka maqan tahay halis. Waxaa jira ugu yaraan ixtiraam.
Habkan, qofka ku helaya ayaa isu sheegi doona inaadan si dhab ah u qaadanayn waxaad samaynayso. Maxaan ka fikiraynaa qofka soo diraya emailka asagoon edeb lahayn ama aan lahayn mawduuc?
Qofka akhriya iimaylkaaga way ku adkaan doontaa inuu ku fikiro sidii xirfadle. Waxay u malayn doontaa in haddii aadan awoodin inaad is abaabusho si aad u qorto email sax ah, aadan awoodin inaad si buuxda u fahamto baahideeda. Tani waxay xitaa kuu sii saamayn kartaa haddii aad la hadlayso macmiil, ha ahaato macnaha B2B ama B2C.
Ugu dambayntii, qofka helaya ayaa naftiisa u sheegi doona inaadan wax tixgelin ah u haynin, waana sababta aadan u qaadan wakhti loo baahnaa si aad u qorto email caadi ah. Xaaladaha kale, waxay la yaabi karaan haddii aad si dhab ah u taqaanno aqoonsigooda iyo xaaladdooda. Dhab ahaantii, waxaad la hadli kartaa maamule adiga oo aan ogayn, sidaa darteed muhiimadda ay leedahay inaad waqtigaaga ku qaadato qoristaada xirfadeed.
READ Warqad Muunad ah si looga tartamo mushahar bixinta
Boostada ayaa si dhaqso ah looga tagay: cawaaqibka
Iimaylka oo si dhaqso ah u baxa ayaa saamayn kara sumcaddaada iyo tan aasaaskaaga.
Runtii, qofka qaataha ayaa laga yaabaa inuu xanaaqo oo uu la hadlo madaxdaada si uu u weydiiyo inaan u dhiibno gacanyare kale. Tani waxay aad ugu badan tahay marka ay timaado lamaane ama maalgaliye. Markaa, waxaad waayi kartaa mudnaantii aad kula xiriiri lahayd ciyaartoyda waaweyn ee shirkaddaada.
Sidoo kale, sumcaddaada ayaa lagu xumayn doonaa shirkadda dhexdeeda taas oo aan mar dambe kugu aamini doonin inay kuu xilsaaraan hawlo gaar ah. Kaas oo aad u xaddidi kara rajooyinkaaga shaqo. Way iska cadahay in midkani uusan si dhakhso leh u siin doonin dallacsiin shaqaale aan muhiimad weyn siinin qoraalka xirfadeed.
Ugu dambayntii, waxaad waayi kartaa macaamiisha ama rajooyinka adiga oo si dhakhso leh u qoraya emayl. Ma dareemayaan in lagu tixgeliyo qiimahooda xaqa ah waxayna u leexan doonaan shirkad kale.
Iimaylku waa qoraal xirfadeed kaas oo ay tahay in aan ixtiraamno isticmaalka iyo sidoo kale sharciyada. Marka la eego, weedhaha saxda ah iyo sidoo kale tibaaxaha asluubta waa inaan la illoobin. Ugu dambeyntii, iska ilaali dhammaan kharashyada qorista a email hoos saamaynta dareenka. Luuqadda aan habboonayn iyo sidoo kale ereyada khaldan ayaa si lama huraan ah kuu waxyeelayn doona.
Iimayl si degdeg ah u baxa waxa uu u noqon karaa iimaylka khatarta ah qoraagiisa Oktoobar 24th, 2021Tranquillus
horeShan talooyin si loo fududeeyo jumladahaaga
socdaTababarka Muuqaalka Microsoft | MAXKAMAD DHAQAN v.2016 - v.2019
Liistada liistada leh iyo akhrinta
Mashruuca Voltaire wuxuu kuu qaadayaa tartanka Orthographic orestographic
Si fiican ugu isticmaal CCI iimaylka
Higgaadinta khaladaadka shaqada: sidee ayay kuu arkeen kuwa ku aqrinaya?